Ny hevitra 10 ambony amin'ny fampiasana citrus dia manimba ity ririnina ity
Ny volana ririnina dia ireo mpihazona rakitsoratra momba ny fihinanana citrus. Ary midika izany fa afaka manidina any an-tendrombohitra ny harena voajanahary sarobidy isan-karazany, noho izany dia azonao atao ny mampiakatra ny haavon'ny fialan-tsasatra any amin'ny rivotra mankany 99.9% (avelao ny zavatra ary ny herinjiro)!
Eny, vonona ny hianatra fomba maro hampiasana hoditra menamena sy mandarin ianao, noho izany ny tranonao dia ho hendry, hanitra ho an'ny distrika iray manontolo, ary ny fahatsapana ho any amin'ny marika "marika" maranitra indrindra?
1. Fanamboarana hazo hazo
Andeha hojerentsika hoe karazana stencil-stencils ho an'ny famokarana cookies izay tsy misy idiranao?
Moa ve hita ny asteriske sy ny lanezy? Apetaho avy eo ny tapany farany ary aza adino ny manamboatra azy ireny amin'ny voninkazo misy menaka!
Ny haingon-trano toy izany dia maina haingana, ary tena mahafinaritra izy ireo hanorin-trano ny taona vaovao!
Ary ny endriky ny endriky ny endriny dia hijery tsara ny lakolosy Krismasy sy kintana vita amin'ny perla amin'ny fomba "rustic". Tsy mahafantatra ny fomba hanaovana azy ireo? Ary efa nanomana lesona tena ilaina ho anareo izahay!
2. Ny Garland
Ajanony - ary eto ny garlanda mamorona indrindra ho anao! Tsara ho an'ny fanjaitra izy io, fa manamboatra varavarankely na varavarankely amin'ny ririnina.
3. labozia malefaka avy amin'ny loto
Raha ampy ny mpihinam-bary tamin'ny volana Desambra mba hahatratra ny haavon'ny fanadiovana "mpangalatra", dia izao no fotoana hanaovana asa mahaliana kokoa. Hiezaka hanao labozia voajanahary ve ianao?
Mijere fotsiny - Ity no vahaolana tsara indrindra hanamboarana ny latabatry ny Taombaovao!
4. Olon-koditra voarara ao anaty sôkôla
Eny, satria miresaka momba ny latabatra fety isika, hanao "fofona maitso" ve isika? Ankoatr'izany dia tsy afaka manao izany koa izy raha tsy misy hoditra citrus. Ary aoka ho azo antoka, ho an'ny recipe ny marika amin'ny voankazo voarara ao anaty sôkôla, ianao dia hanana filaharan'ireo namana, sipandrano, ary ny rafozambavin'ny rafozan-dry zareo!
Ny fikarakarana "Orange voankazo mamy ao anaty sôkôla":
sôkôla (1 kilaometatra);
rano (300 ml);
sira (300 g).
Manapaka ny hoditra menaka amin'ny ravina isika, mameno azy amin'ny rano ary mahandro mandritra ny dimy minitra. Manao rano izahay ary maina. Avy eo isika dia manomana siramamy siramamy (mitovy amin'ny siramamy mitovy amin'ny siramamy +) ary mahandro sodina efa sasan-tserasera efa sasantsasany. Tsara ihany koa ny rehetra: manome poizina mamy amin'ny ravina na peta-taratasy izahay, avy eo dia mamontsina sôkôlà ao anaty rano izahay ary atsofoka ao anaty tadin'ny hoditra tsirairay. Ny voankazo kendied dia ho tsara kokoa raha ny tendro faharoa dia voapoizina amin'ny siramamy.
5. Fisotro amin'ny vorona
Eny ary, raha manomana ny sakafo matsiro ianao, dia mahafantatra lesona tsara iray ho an'ny zanakao - afaka manao feon'ny vorona izy. Ahoana ny hevitrao?
6. Fofona ho an'ny tokantrano
Fotoana izao hikarakarana ny tranonao manokana. Ankoatra izany, amin'ny alin'ny ririnina dia afaka averina dinihina ireo sarimihetsika am-pitiavana sy fialam-boly mahafinaritra indrindra. Ary mba hahatonga ny fofona maivamaivana sy mandevona ny mandarin ho lava eny amin'ny rivotra na dia lava aza, fa alefao ny hodiny vitsivitsy amin'ny alàlan'ny tady ary alamino ny rafitra vita amin'ny batterie!
7. Faniriana ho an'ny lovia, ny tsindrin-tsakafo sy ny vatana
Heverinao ve fa efa maina ny loharanom-baovao? Ary eto isika - nahita fomba iray hafa ahafahana manamboatra menaka sy menamena amin'ny fonosana, izay hanova anareo ny mahandro tsara indrindra! Mba hanaovana izany, dia mila manamaivana ny fako siramamy rehetra ianao, ary avy eo kapohina ao anaty blender. Ny hoditra hafahafa dia ho voatahiry mandritra ny taona iray manontolo ary ho lasa zava-dehibe indrindra amin'ny fanomanana ny siramamy, cocktails ary ny hena. Ary na izany aza, ity dia vatosoa tena tsara!
8. Krismasy Krismasy
Eny, raha mahatsapa ianao fa ny isan'ny mandarin dia nihoatra ny dikan-dalàna rehetra azo atao, dia afaka manao "zavatra hafa" ianao ary manao diaben'ny Taombaovao mahagaga!
Alefaso kosa ireo voapetaka ireo ary atsipazo ao anaty lafaoro mba ho maina amin'ny hafanana 160 degre eo ho eo. Ny zavatra rehetra vonona?
Avy eo dia manana adiny 3-4 ianao mba hijery horonan-tsary iray hafa ilaina, izay hianaranao ny felam-boninkazo vita amin'ny voninkazo sy ny voankazo vita amin'ny tananao!
Eny, efa manamboatra ny tenantsika amin'ny fahaiza-manao ilaina isika, izay midika fa fotoana hanangonana raozy hafa - avy amin'ny mandarin maina na afangarony amin'ny kofehy kesika!
Ary raha manampy trondro sy zana-kavoana vitsivitsy ianao, dia ho lasa kanto indrindra ny tranonao na eny amin'ny arabe manontolo mihitsy aza!
9. Garland avy amin'ny peila manontolo
Ary ahoana ny hevitrao - inona no tianao handroana ny hoditra mandarinina ary hanao ny garlanda varavarankely?
10. Fanomezana namana
Eny, ny zava-drehetra, miaraka amin'ny fahalalantsika, fotoana izao hampiasana araka izay tiany - hamonjena ny teti-bolan'ny fianakaviana ary hanome ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny namana amin'ny fotoana iray ihany. Manontany ny fomba Fa jereo - toy ny labozia malefaka misy mandarinina sy kanelina amin'ny tananao manokana no hahafaly sy hampitony ny fony mandra-pahatongan'ny lohataona!
40 manamboninahitra mahatsiravina
14 amin'ireo zavatra tsy ampoizinao indrindra izay mety hiseho amin'ny fofony
Fiaramanidina miisa 10 izay tsara lavitra noho ny fanintelony
29 alika, izay misy tsy mety
Ny dogs dia nanontany ny fahaiza-manaon'ny mpaka sary, ary tena mampihomehy tokoa izany!
Ohatra 22 momba ny fisakaizam-po amin'ny alika
Aprikot jam miaraka amin'ny nucleoli - recipe
Harona mahavokatra voankazo varimbazaha
Ny rojo an'ny Princess Diana dia hametraka 12 tapitrisa dolara amin'ny hamandoana
Ny Lapan'ny tanànan'i Riga
Tomatonina voatabia maitso miaraka amin'ny tongolo lay
Leggings amin'ny firaketana hoditra
Firavaka eo amin'ny hodi-maso
Wedding Dresses by Rronovias 2014
Kitapo mivoaka amin'ny hopitaly
Ny tongotro dia mihovotrovotra - inona no tokony ataoko?
Curd avy amin'ny kefir